Banyere Anyị - Suzhou Ocan Polymer Ihe Co., Ltd
Suzhou OCAN Polymer Ihe Co., Ltd dị na mmepe district nke Suzhou na edebanyere isi obodo nde mmadụ 35. OCAN na-pụrụ iche na-na mmepụta nke ịkwanyere / PITA (gụnyere Ibé akwụkwọ, na-apụta, film) ihe karịrị afọ 20. Ugbu a, OCAN nwere 14 elu mmepụta edoghi, ọbọ a kwa ọnwa ike nke 3500 tọn. Anyị na ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe etinyere dị ka ígwè obibi akwụkwọ, nkwakọ, drum Kechie, agụmakwụkwọ, electric ngwa oru na mmiri ọgwụgwọ ọrụ.
OCAN mgbe kwekọrọ mmụọ nke "Ime ihe n'eziokwu", "pragmatic", "Innovation" na "Win-Win" ebe ya oruru. Anyị bụghị nanị na-enye elu àgwà ngwaahịa ma ịrụzi ahịa anyị dum na-heartedly. Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ na-arụkọ ọrụ!
suzhou Ocan Polymer Ihe Co., Ltd bụ ọkachamara ịkwanyere na PITA emeputa. Afọ 20 nke R & D, mmepụta na sales experience.The ụlọ ọrụ na-eme extrusion & calerdering akara.
OCAN ọkọkpọhi a dịgasị iche iche nke patent akwụkwọ, elu-tech ngwaahịa, China ika-aha ụlọ ọrụ, ISO9001: 2008 usoro akwụkwọ na ule site SGS iru, RoHS na gburugburu ebe obibi testing chọrọ. Kwa Afọ mmepụta uru 30000tons.
ịkwanyere nghọta usoro
ịkwanyere frosted mpempe akwụkwọ usoro
ịkwanyere ọcha usoro
ịkwanyere black usoro
ịkwanyere agba usoro
ịkwanyere soft film usoro
ịkwanyere foil usoro
ịkwanyere Kechie igba
A PITA Series
n'elu okokụre: kenkowaputa ma ọ bụ Mat / embossed
700 * 1000mm, 1000 * 1400mm, 915 * 1220mm, 915 * 1830mm, 1000 * 2000mm, 1220 * 2440mm ma ọ bụ dị ka ndị ahịa 'nhọrọ.
Welcome ịkpọtụrụ anyị! Anyị na-atụ anya guzosie ike ruo ogologo oge, a pụrụ ịdabere na, ihe ọma na pụrụ ịtụkwasị obi mmekọrịta gị nkịtị development.
Quality Ụkpụrụ: People-ndị dabeere, Participative, Ezigbo, Innovative na-eju afọ
Quality Mgbaru Ọsọ: Product Ruru Eru Rate> = 99%
Ahịa Afọ Ojuju> = 78%
Na-oge nzipu Rate> = 98%
Laghachi Rate <= 0,8%